काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई खुला पत्र :: सुवास न्यौपाने :: Setopati
हरेक देशको गरिमामय थलो हो विश्वविद्यालय। पठनपाठनमात्र नभई विचार-विमर्श, विभिन्न खोज अनुसन्धान गर्ने थलो हो।
नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चिकै एक क्रान्ति ल्याएको नाम हो ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय’।
काठमाडौं विश्वविद्यालय यसको स्थापना कालदेखि नै उचाइमा रहेको छ। उच्चस्तरीय प्रयोगशाला, पठनपाठनको वातावरण, विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधाका लागि उचाइ पाएकै कारण म र म जस्ता हजारौं विद्यार्थीको रोजाइमा परेको हो।
विश्वविद्यालयमा हुने पठनपाठन र अन्य क्रियाकलापमा विद्यार्थी मात्र नभइ सिंगो देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ र तिनै कुराले निर्धारण गर्छ, मेरो, मेरा साथीहरूको र सिंगो नेपालको भविष्य। तर यहाँ त विद्यार्थीको वर्तमान नै अन्यौलमा छ भविष्यको त कुरै छोडौं।
एक विद्यार्थीले कुनै विश्वविद्यालयमा भर्ना लिइ सकेपछि उसले पाउने सेवा सुविधा नैसर्गिक अधिकार जस्तै हुन्छन्।
तर पछिल्ला दिनहरूमा विश्वविद्यालयको हविगत दयनीय छ। विश्वविद्यालय बन्द, हडतालको मारमा छन् विद्यार्थी भने प्रचार गरिए अनुसारका सुविधा पाएका छनन् विद्यार्थीले।
अब कुरो आउँछ यसको जिम्मेवार कसले लिने? बन्दकर्ता ? विश्वविद्यालय प्रशासन ? कि विद्यार्थी ? यसको जवाफ पक्कै पनि बन्दकर्ता भन्ने आउँछ तर बन्दकर्ताले जारी गरेका हरेक विज्ञप्तिमा लेखिएको छ कि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन हो।
एक विद्यार्थीको हैसियतमा सम्पूर्ण माग जायज नै देखिन्छन्। बन्दकर्ताले उठाएका विभिन्न अनियमितता , भ्रष्टाचार र लापरबाही हेर्दा प्रशासन गलत देखिन्छ र यति दिन बितिसक्दा पनि प्रशासनबाट कुनै पनि उत्तर नआउँदा म र म जस्ता विद्यार्थीहरूमा डर पसेको छ कि साँच्चै यी गल्ती प्रशासनबाटै भएका त होइनन् ? यदि प्रशासनबाट भएका हुन् भने विश्वविद्यालयको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह उठ्छ।
एक जिम्मेवार विद्यार्थीको नाताबाट म यति दिनसम्म प्रशासनको जवाफ कुरिरहेको थिएँ तर प्रशासनले जवाफ नदिँदा प्रशासनबाट नै गल्ती भएका छन् कि भन्ने आशंका पैदा भएका छन्।
यदि छैन भने प्रशासन बोल्नुपर्छ। विद्यार्थीका नाताले यी प्रश्न प्रशासनमाथि उठाउँदा साँच्चिकै मलाई निकै खिन्नता लागेको छ अनि चिन्ता लागेको छ मेरो, मेरा साथीहरूको, विश्वविद्यालयको र सिंगो देशको भविष्यमाथि।
तसर्थ, तथ्यसत्यका साथ म काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासनलाई खुलेर जवाफ दिन आग्रह गर्दछु।
स्कुल अफ इन्जिनियरिङ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३, २०७६, ०३:१०:००